Civil Society Calls For Broader Panel On Zim Crisis - The Zimbabwe Independent
HomePoliticsCivil Society Calls For Broader Panel On Zim Crisis
AFRICAN civil society leaders are pressing for the appointment of a Pan-African panel of eminent persons to intervene in the Zimbabwean political crisis triggered by delays and refusals by authorities to release results of last monthâ€™s presidential election.
In a communiquÃ© released after the meeting, which was characterised by emotional pleas for the international community to intervene in Zimbabwe, the civic leaders asked the AU to send a team of eminent persons to lead an initiative to resolve the southern African countryâ€™s crisis.
The civil society leaders said the AU should intervene in Zimbabwe in line with the organisationâ€™s constitutive laws which provide the continental group with the right to intervene in a member state when certain violations are perpetrated by the state.
â€œWe call on the African Union to protect the Zimbabwean population against the military and paramilitary retribution that communities are currently being subjected to for voting President Mugabe out of office,â€ the communiquÃ© read.
â€œZimbabweans are witnessing a state of organised violence where we have seen people being injured while others are displaced as a result of the destruction of their properties,â€ Sisulu said.
â€œThe major crisis we face right now is a humanitarian crisis and what we need is for the civic society to help put a stop to the violence.â€
â€œAfrican leaders and the EU and even the UN should speak out on Mugabe and the big problem is that Mugabe and his government are at war with the people of Zimbabwe.
They have stolen an election, are perpetrating violence and there is the issue of the illegitimacy of the Zimbabwean government,â€ Mhanda said.